musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies US Gorofu Phil Mickelson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeAmerican Golfer inonyanya kuzivikanwa nezita rezita rokuti "Lefty". Yedu Phil Mickelson Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu hwake. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvinyatsozivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva nezvazvo kufamba kwake kwenguva refu kuenda kuchipatara zita guru shure kwekushandura pro. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezvehupenyu hweFil Mickelson hunofadza chaizvo. Iye zvino, pasina humwezve, ngatitangei.
Phil Mickelson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Phil Alfred Mickelson akaberekwa musi we 16th waJune 1970 kuSan Diego muCalifornia, United States. Mickelson ndiye wechipiri wevana vatatu vakazvarwa naamai vake Mary Mickelson uye kuna baba vake Phil Mickelson Sr.
Nezvemhuri yake, Phil ndeweAmerica wenyika yakachena nevePutukezi, chiItaly / Sicilian neFinland-chiSweden midzi.
Kukura muSan Diego pamwe chete nehanzvadzi yake yakakura Tina uye mukoma wangu Tim, Young Mickelson akanga akafanana nemumwe wake, Rory McIlroy, achiziva gorofu pakarepo paakatanga kutamba.
Achitungamirirwa nababa vake vaaishanda navo gorofu pamusha wavo, Mickelson ane makore ane gumi nemana akawedzera chido chakasimba chemutambo, achida kusvetuka neruoko rwake rworuboshwe kurwisana nababa vake.
"Mickelson aizoramba achisvetuka neruoko rwake rworuboshwe pasinei nekuedza kuchinjwa. Kunyange zvakadaro, kusvetuka kwake kwakanga kusina munhu wese wandakaona kune mumwe munhu muduku. Takanga tisiri kuzonyengedza zvakapoteredza nekushandura kusvetuka kwake. Pane kudaro, takamuita chiedza chechipiri chekutya chechikwata. "
Akayeuka Mickelson Sr.
Vabereki vake vakayeukawo kuti mwana akaoma akaedza kamwe kubva kumusha, achitaurira ani zvake ane hanya kuteerera kuti ari kuenda kugorofu. Yakanga iine nyaya yemakore gare gare kuti gwara rekufamba gorofu raikwanise 'kurota uye kubudirira', kutanga kubva kuchikoro chesekondari.
Phil Mickelson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Chinokosha pakati peMickelson chidzidzo chekudzidza kwaiva chidzidzo chake paSan Diego High chikoro chisati chaenderera kuChedhedral Catholic High chikoro chekoroji prep. Yakanga iri kuchikoro chesekondari kuti Mickelson akatanga chikoro chake chekugadzirira gorofu sezvo wechidiki achikunda pasina zvishoma pane 34 San Diego Junior Golf Association Titles.
Kubudirira kwake kwepakutanga mumutambo kunogona kuve kwakakonzerwa nebasa rababa vake semutyairi, basa rakamupa tikiti dzekubhururuka kuenda kune dzimwe nzvimbo dzekukwikwidza kwake madiki apo amai vake, kune rumwe rutivi, vakatora Jobho zvakare kuti vawane mamwe mari .
Somugumisiro, pakanga pasina magumo pakuona izvo izvo Mickelson aigona kubudirira kusanganisira kuhwina zvitatu zvakapikisana muAmerican Junior Golf Association mutambo wegore uye akadzidzira zvikoro kuArizona State University apo akadzidza zvepfungwa.
Phil Mickelson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Kudzidza kuArizona State University akaona Mickelson kudare kutarisira gorofu-pros, vateki nevanyori vemitambo nokuda kwezvikonzero zvisiri kure nekuwedzera kwekorogi yegorofu zvinowanzobatana nemakwikwi matatu eCAAA.
Vakatarisa havagoni kubatsira asi vachishamisika kuti nei chishamiso chakasara chechikoro chemumishinari chisina kutaurira kojiji kuti iite unyanzvi. Mickelson akazotsanangura kuti:
"Chikoro ndechokuzvipira kwandakaita. Ini ndakaronga kuronga urongwa hwemakore mana. Ndakanzwa kuti mumakore mana [ndiri mukoroji] ndinogona kufambisa mutsara wangu uye ndine simba rakakwana kukwikwidza paPGA [Professional Golf Association] Tour ".
Phil Mickelson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
1992 ndiyo gore iro Mickelson akapedza kudzidza kubva kuyunivhesiti uye akabva atora pro. Chirongwa chikuru-chaitarisira chakagamuchirwa nevakawanda kusanganisira mutori wenhau uyo ​​akashingaira akazivisa kuti:
"Kwete kubvira Jack Nicklaus ane mukana wechidiki achiri kufarira nyika yegorofu saMickelson."
Nokudaro zvakatanga makore gumi--kufamba kwenguva kusvika kune 'Kukurukurirana kukuru' naMickelson uyo akakunda mukana wePGA wekushanyirwa mukati meZ1990 asi akawana zvakaoma kukunda chikuru.
Mickelson uyo akanyorwa "Mutambi wakanakisisa haangambofi akakunda huru," panguva iyoyo, pakupedzisira akazobudirira mu2004 apo akakunda 68th 'Masters Tournament' pa 'Augusta National Golf Club' muGeorgia.
Saka zvakanyanya kufara kwokuti Mickelson kukunda nguva yakanga yakarongwa Nha. 9 mumutambo weTV Guide we "25 Most Awesome Sports Moments (yemakore ekupedzisira e15)."
Phil Mickelson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Mickelson ave akaroora mudzimai wake anonzi Amy McBride. Vaviri vacho vakasangana paArizona State University apo vakatanga sekolishi sweethearts.
Amy akanga ari panguva iyo asingabatanidzi mumitambo sezvaaishumira se cheerleader pamwe neFenieni Suns yeboka reNBA. Paakafambidzana kwemakore mana, Mickelson akafamba pasi pechikumbaridzo naAmy musi we 16th waNovember 1996. Zvisinei, Mifananidzo yemuchato wavo yakanga isina kuitwa pachena.
Imba yavo inokomborerwa nevanasikana vaviri uye mumwe mwanakomana. Vanosanganisira Amanda akaberekerwa mu1999, Sophia akaberekerwa mu2001, uye Evan akaberekwa mu 2003.
Pamwechete, mhuri yave ichiri kuburikidza nepamusoro uye pasi ichibatanidza Amy ari kuongororwa nekenza yemuBrams mu2009 asi akapona pashure pemwedzi yehondo yakaoma. Mune chikamu chake, Mickelson akatambura chirwere cheporiori mu 2009 uye akavhiyiwa maviri kuchipatara mu2016.
Phil Mickelson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Mickelson akaberekerwa mumhuri ine rudo yemitambo yevashanu. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yake.
Nezvebaba vaMickelson: Phil Mickelson sr ndiye baba vegorofu genius. Taura nezvebasa rake, Mickelson sr akatanga seNavy Fighter Jet pilot asati ashanyira kune ndege dzinobhururuka dzebhizimisi. Ndiye mutungamiri akanaka uyo asina kungodzidzisa mwanakomana wake kuti aite sei gorofu asi kuti angafambisa sei ndege zvakare.
NezveMickelson Amai: Mary Mickelson amai vaPhil. Akave akaroora kuna Phil Mickelson Sr. kubvira 19th yaSeptember 1964. Zvakakosha kucherechedza kuti baba vaMaria (mbuya vaMickelson vaamai) Al Santos aiva mubati wehove uyo akashanda semafambisi uye akaitamba gorofu mune zve 60.
NezveMickelson vakoma vake: Mickelson ane vanakomana vaviri chete, hanzvadzi yechikuru anonzi Tina uye munun'una wechidiki anonzi John.
Tina akanga akaita saMickelson, akaiswa kugorofu apo aikwanisa kufamba uye akakura achida mutambo. Kunyange zvisingaiti zvakananga mumutambo semutambi, Tina ndiye "A" kirasi yePGA Member uyewo mudzidzisi wekudzidzisa uyo anobatsira vamwe kuvandudza mitambo yavo yegorofu, pakati pezvimwe zvinokurudzira miitiro.
Tim, kune rumwe rutivi, ari panguva yeiyo post, mutungamiri wehama yake mukuru Mickelson. Asati atora chikamu, Tim aiva mujeri kune tarenda iri kuuya pamusoro pekushanyirana kwePGA, Jon Rahm uyewo goroferi yemamate.
Mukuwedzera, Tim anozivikanwa kuva mhirizhonga yakatarisana naMickelson, nekuda kwekuti iye ari kuruboshwe asi ari kutamba gorofu kurudyi apo mukoma wake mukuru ane ruoko rworudyi asi anotamba gorofu kuruboshwe. Hazvishamisi kuti akazotumidzwa zita rokuti Lefty.
Phil Mickelson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Kutsigirwa uye Kubhadhara
Phil Mickelson haasi pasi pe $ 50 madhora emari gore negore kubva pakuonekwa uye kuvimbiswa nevatsigiri. Dzinosanganisira Grayhawk, Barclays, Enbrel, KPMG, Exxon Mobil, Rolex, Amgen, Titleist, Ford uye Callaway.
Achienderera mberi kune hupfumi hwake, Mickelson ane gorozi nzvimbo dzinosanganisira zvitatu zvakavanzika uye zvitatu zvevanhu. Nzira imwe neimwe inowanikwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana uye inopa chiitiko chakasiyana-siyana chegorofu.
Phil Mickelson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Mickelson muchengeti ane gweta ane ruzivo uyo pasinei nekuzivikanwa achiri kunyanya pasi pasi uye ane marefu mashure ekuzorora mairi.
Kunyange zvazvo kukunda kunokosha, Mickelson anoita kuti chive chikonzero chokufadza vateveri vake, nokudaro kukurudzira kuti kune zvakawanda kune mutambo pane kungokunda. Maererano naye:
"Goroferi muchengeti, kufanana nomutambi. Vanhu vanobhadhara mari kuti vaende uye vatarise iwe kutamba, uye ini handifungi kuti vanobhadhara kungokuona iwe uchirova motokari pasi, unopfura pfuti, uye maviri-putt. "
Kune Mickelson, mhuri inotanga kuuya sezvinoratidzwa nenzira iyo yakanyora kusashanda kwakanaka mugore ra2003 apo mudzimai wake akada kufa paaiberekwa apo mwanakomana wake Evans, akapona maminitsi 7 asina mweya mukati mechizvaro chaamai vake.
"Phil akazununguswa nekushungurudzika kwaakazovata mumwaka we2003, wake wakaipisisa mumakore 12 paPGA Tour."
Akanyora Mitambo Illustrated yaAran Shipnuck pamusoro peMickelson iyo gore iroro.
Nokuda kwekunzwa kwake, Mickelson ane tsitsi uye anozivikanwa nekupa zvikamu zvikuru zvemari yaanowana kune rudo, dzidzo, uye zvesayenzi. Iye anozivikanwawo nekupa zvipo zvekuchengetedza vana vevarwi veMasoja avo vakarasikirwa noupenyu hwavo panguva yekudzidziswa uye pamabasa.
Kunze kutamba gorofu, Phil Mickelson anofarira kufamba ndege. Achitenda kubasa rababa vake vose-vakapoteredza, Mickelson ndiye mutyairi wechibharo uye ane ndege yake.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Phil Mickelson Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At childhood biography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!